१ Re कारण किन तपाईं धेरै जसो समय एक्लो रहन मनपराउनुहुन्छ - ब्लग
१ Re कारण किन तपाईं धेरै जसो समय एक्लो रहन मनपराउनुहुन्छ
के तपाईं धेरै जसो समय एक्लो रहन चाहनुहुन्छ?
के तपाई सामाजिक अन्तरक्रियामा एकान्तता चाहानुहुन्छ?
तपाई निश्चित रूपमा मात्र एक हुनुहुन्न। र यो महसुस गर्न पूर्ण रूपमा ठीक छ।
तर के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि तपाईं एक्लै समयको यति धेरै रमाइलो किन गर्नुहुन्छ?
यहाँ केहि सम्भावित कारणहरू छन्।
१. तपाई एक अन्तर्मुखी हुनुहुन्छ।
तपाईंले पहिले 'अंतर्मुखी' भन्ने शब्द सुन्नुभएको हुन सक्छ, वा तपाईं पहिले नै एक को रूपमा पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ, तर यो लगभग निश्चित छ कि तपाईं अत्यन्त अन्तर्मुखी व्यक्ति हुनुहुन्छ।
यस कुराको क्रुक्स हो, तपाईंले सामाजिक अन्तरक्रिया एक्स्ट्रावर्ट सामर्थ्यको तुलनामा कम्तिमा कम इनामदायी पाउनुहुनेछ।
सूर्योदय र नयाँ शुरुआत को बारे मा उद्धरण
यो किनभने तपाइँको मस्तिष्क न्यूरोट्रान्समिटर डोपामाइनप्रति धेरै संवेदनशील छ, जसले लामो समयसम्म सामाजिक एक्सपोजरको साथ ओभरस्टिम्युलेसन निम्त्याउँछ।
एकै समयमा, तपाईं आफ्नो एक्लो समय धेरै इनामदायी पाउनुहुन्छ।
त्यो किनभने तपाईंको मस्तिष्क न्युरोट्रान्समिटर एसिटिचोलिनमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्छ, जसले शान्त प्रकारको खुशी प्रदान गर्दछ।
यसको तुलनामा यसमा अझ धेरै कुरा छ, अवश्य पनि, र हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाई यस विषयमा हाम्रो पूरा लेख पढ्न सक्नुहुन्छ: के यो वास्तव मा एक इंट्रोवर्ट हुन मतलब
२. तपाईं एक कम उर्जा व्यक्ति हुनुहुन्छ।
केहि मानिसहरु संग ऊर्जा को एक अंतहीन आपूर्ति छ जस्तो देखिन्छ।
अरूहरू, आफैंले जस्तै धेरै सीमित आपूर्तिहरू छन्।
यो एक इंट्रोवर्ट बनाम एक बहिर्मुखी हुनुको जस्तो समान छैन, तर त्यहाँ लिंक पनि हुन सक्दछ।
तपाईं अत्यधिक सक्रिय व्यक्ति हुनुहुन्न र विश्वमा तपाईंको मनपर्ने स्थान राम्रो आरामदायक कुर्सी वा सोफे तपाईं बसेर हुनुहुन्छ।
यसको मतलब यो होइन कि तपाईं अयोग्य वा अस्वस्थ हुनुहुन्छ - तपाईं अझै नियमित व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईंले आराम गर्नुपर्दछ र पुनःप्राप्ति गर्न समय पाउनुहुनेछ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्दछ।
जहाँ कोही व्यक्ति गतिविधि द्वारा बढी उत्साहित देखिन्छन्, शारीरिक रूपले कडा कुनै पनि पछि तपाईको मन्त्र यस्तो छ: 'र आराम गर्नुहोस् ...'
त्यसकारण तपाई किन खर्च - र रमाईलो - धेरै समय एक्लो खर्च।
You. तपाईले गर्न चाहानु हुने कामहरू गर्नुहोस्।
धेरै सामाजिक अवस्थाहरूमा सम्झौताको एक तत्वको आवश्यक पर्दछ।
दुई वा बढि व्यक्तिसँग, तपाईं जहिले पनि आफ्नो मनपर्ने रेस्टुरेन्टमा जान वा फिल्म हेर्न चाहनुहुन्छ जुन तपाईं हेर्न चाहानुहुन्न।
र धेरै तपाईं जस्तै सक्छ सम्झौता आवश्यक छ जब, तपाईं केवल जब विकल्प दिनुहुन्छ नचाहनु हुन्छ।
एक्लो हुनुको मतलब तपाई कुनै पनि क्षण मा के गर्न चाहानुहुन्छ छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
र यो तपाईंलाई मनपर्ने तरिका हो।
You. तपाईं शान्त र शान्त हुनुहुन्छ।
आंशिक रूपमा तपाईंको अंतर्मुखी प्रकृतिको कारण, तपाईं मौनमा बस्न धेरै खुसी हुनुहुन्छ।
तर आज मौन एउटा दुर्लभ चीज हो। तपाईले अर्को व्यक्तिलाई मिक्समा जोड्न सक्नु भएमा तपाईले आनन्द लिनु भएको शान्ति चकनाचूर हुन्छ।
अर्को व्यक्तिले तपाइँसँग तिनीहरूको प्रभाव पार्नको लागि तपाइँसँग कुरा गर्न पनि पर्दैन।
तिनीहरू निकटतामा छन् भन्ने तथ्यले नै तपाईलाई कुनै गतिविधिमा पूर्णतया आराम वा आफूलाई डुबाउन सक्षम महसुस गर्नुहुन्न।
मात्र जब तपाईं पूर्ण रूपमा एक्लो हुन्छ तपाईं शान्ति पाउन सक्नुहुन्छ।
You. तपाईं हुनुहुन्छ गहिरो चिन्तक ।
तपाईंले प्राय: खोज्नु भएको शान्ति र शान्तिले तपाईंलाई बस्न र चीजहरूको बारेमा साँच्चिकै सोच्न अनुमति दिन्छ।
र यो त्यस्तो कुरा हो जुन तपाईंलाई वास्तवमै गर्न मनपर्दछ।
जहाँसम्म धेरै व्यक्तिहरू आफ्ना विचारहरूसँग एक्लै बस्न मनपर्दैन, तपाईं अलिकता आत्मसंयम पनि आरामदायी पाउनुहुनेछ।
त्यस्तै गरी, तपाईले जीवन र ब्रह्माण्डको बारेमा ती गहिरा र अर्थपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नको लागि प्रयासको लागि एक बज प्राप्त गर्नुभयो।
तपाईं एक दार्शनिक चिन्तक हुनुहुन्छ, र विगतका सबै महान दार्शनिकहरू जस्तै, तपाईंलाई आफ्नो उत्तम सोचको लागि एक्लै समय चाहिन्छ।
तपाईं निश्चित रूपमा यो अरूको वरिपरि गर्न सक्नुहुन्न।
You. तपाईं एक्लो काम गर्नुहुन्छ।
गहिरो सोच संग, तपाईं आफ्नो काम मा ध्यान दिन एक्लै आफ्नो समय चाहिन्छ।
तपाईं आफ्नो घर अफिसमा होल्डिंगमा धेरै उत्पादक हुनुहुन्छ (वा एक्लो काम जुन तपाईंको कामको स्थानमा छ) तपाईं भन्दा जब अन्य व्यक्ति नजिक हुन्छन्।
तपाईका वरिपरि रहेका सबै अवरोधहरूबाट तपाईलाई बाहिर निस्कन गाह्रो लाग्छ - मानिसहरू कुरा गरिरहेका, प्रश्नहरू अरूले तपाईलाई सोध्छन्, काम गर्ने व्यक्तिको आवाज, सामान्य हब्ब जुन धेरै मानिसहरू एक ठाउँमा सँगै हुँदा सिर्जना गरिन्छ।
तपाईं एक्लै हुन रुचाउनुहुन्छ। तपाईं के गरिरहनु भएकोमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो प्रवाह राज्यमा पुग्नुहुनेछ जहाँ तपाईं उत्तम काम गर्नुहुन्छ।
यदि तपाईं एक्लो हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यी9फाइदाहरू एक हुनका लागि बुझ्नुहुनेछ
२ Important महत्त्वपूर्ण कुराहरू जब तपाई एक्लै समय खर्च गर्नुहुन्छ सिक्नुहुन्छ
१० कारणहरू किन तपाईं एक सम्बन्धमा हुन डराउनुहुन्छ
आत्मीयताको डर: कारणहरू, संकेतहरू, र यसलाई कसरी पराजित गर्ने
इंट्रोभरट्सको Hidden लुकेका शक्तिहरू
You. तपाईं नाटक गर्नुहुन्न।
तपाईको दिमागमा धेरै मानिस अनावश्यक नाटकमा व्यस्त रहन्छन्।
तिनीहरू के गर्छन् भन्ने बारे बहस र गफ, कसले अपमानित, किन यति खराब मान्छे, र कसरी तिनीहरू धर्मी पार्टी हो।
यस प्रकारको चीजले तपाईलाई ... कुनै पनि हिसाबले चासो राख्दैन।
सायद स्कूलमा बाहेक, तपाईं नाटक गर्नुहुन्न।
यो केवल उर्जाको अपशिष्ट हो।
त्यसो भए, नाटकबाट बच्न, तपाई मानिसहरूलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ - कम्तिमा, प्रायः व्यक्ति।
You. तपाई व्यक्तिसंग सतही कुराकानी मन पराउनुहुन्न।
त्यहाँ सतही स्तरको कुराकानीको बारेमा तपाइँलाई धेरै असन्तुष्टि दिईएको छ अन्य मानिसहरूले रमाईलो गरेजस्तो।
सानो कुराकानी, रमाइलो लाग्ने सानो परिणामको अनियमित चीजहरूको बारेमा कुराकानी, यहाँ सम्म कि माथि वर्णन गरिएको गफ र सानो तर्कहरू।
तपाईलाई लाग्छ कि तपाईको समय अन्य चीजहरूमा बढी खर्च भयो।
चासोको नाटक गर्न को लागी कस्तो अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ उल्लेख गर्न को लागी छैन।
जब कुराकानीहरू गहिरा र अधिक चिन्ताजनक विषयहरूको क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्छन्, तपाईं पक्कै पनि अरूको संगतिको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, तर तपाईंले फेला पार्नुभयो यो एकदम दुर्लभ घटना हो।
You। तपाई धेरै भावनात्मक रुपमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
तपाईलाई हर समय मानिसहरू वरिपरि रहन आवश्यकता पर्दैन।
तपाईं खुशीको आफ्नै स्रोत हुनुहुन्छ।
तपाई भावनाहरु का जंगली रोलरकोस्टर अनुभव गर्नुहुन्न जुन अरू धेरैले गर्छन्। यो तपाईको लागि सौम्य र तलको हो।
तपाईं आफ्नै समस्याहरूको मार्फत काम गर्न र सकारात्मक मुड भन्दा कमबाट बाहिर निस्कनको लागि पर्याप्त सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईंलाई अरू कसैको मद्दत आउँदैन।
तपाईं आफैंलाई माया गर्नुहुन्छ र यो तपाईंको लागि धेरै समयको लागि पर्याप्त छ।
के हुन्छ जब तपाइँ एक्लै बोर हुनुहुन्छ
१०. तपाईं अरूको भावनात्मक बोझले बोझ महसुस गर्नुहुन्छ।
यति भावनात्मक रूपमा स्वतन्त्र भए पनि, तपाईं वास्तवमा अन्य व्यक्तिहरूको नकारात्मक भावनात्मक अभिव्यक्ति एकदम चुनौतीपूर्ण हुन पाउनुहुन्छ।
यस्तो लाग्दछ कि एक भार तपाईंको काँधमा राखिएको छ तिनीहरूलाई राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्न प्रयास गर्न।
यो विशेष गरी केस हो यदि तपाईं इम्पाथ हुनुहुन्छ। त्यसो भए, अरूको भावनाहरू सजिलैसँग अवशोषित हुन्छन् र ब्लक गर्न गाह्रो हुन्छ, र त्यसैले एक्लै समय खर्च गर्नु तपाईंको भावनात्मक सन्तुलनलाई सुरक्षित राख्न सजिलो तरीका हुन सक्छ।
११. तपाई आफ्नो जीवनको साथ एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ।
तपाई केवल आफ्नो सबै समय चीजहरू गरिरहेको देख्नु र मान्छेलाई हेर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्न।
तपाई आफैले गरेको कामबाट तपाई खुशी हुनुहुन्छ।
तपाईं निश्चित रूपमा FOMO बाट ग्रस्त हुनुहुन्न (हराएको डर) किनभने तपाईं आफैंमा भएको जस्तो रमाईलोको रूपमा अन्य चीजहरूको मजा लिने कल्पना गर्न सक्नुहुन्न।
यसले तपाईंलाई अरूले तपाईंलाई आमन्त्रित गरेको चीजहरूमा कुनै कुरा गर्न सजिलो बनाउँदछ।
१२. तपाई साधारण मानिसहरूलाई धेरै मन पराउनुहुन्न।
तपाईं धेरै समय एक्लो खर्च गर्नुहुन्छ किनभने, कमसेकम तपाईंको लागि, प्रायः अन्य व्यक्तिहरू जानेको जस्तो देखिँदैन।
त्यहाँ छन् धेरै कारणले तपाईलाई धेरै मानिसहरु मन नपर्न सक्छ , तर केहि सामान्यहरू:
- तपाईंको विगतको बाट एक नराम्रो अनुभव।
- तपाई सोच्नुहुन्छ कि मानिसहरु अल्छी, आत्म-अवशोषित, र स्वार्थी ।
- तपाईं तिनीहरूको त्रुटिहरू पछि देख्न सक्नुहुन्न।
- तपाईले देख्नु भयो कि मानिसहरूले सँधै नराम्रो विकल्पहरू बनाउँदछन् र यसले तपाईलाई निराश पार्छ।
१.. तपाई आफ्नो कम्पनीमा बढी सजिलो महसुस गर्नुहुन्छ।
यो त्यहि हो जहाँ चीजहरू तपाईंको चिन्ताबाट एक्लै समयको सट्टा सामाजिक चिन्तातर्फ अलि बढ्दछन्।
'सहज रूपमा' हुनुको शाब्दिक अर्थ यो छ कि सामाजिक कुराकानी भन्दा यो एक्लो रहन सजिलो छ।
किनभने त्यहाँ कुनै दबाब छैन तपाईले कुनै खास तरिकाले कार्य गर्न, सामाजिक शिष्टाचार अनुरूप, वा मास्क लगाउन।
र किनभने तपाईंले चिन्ता लिनु पर्दैन कि अन्य व्यक्तिले तपाईंको बारेमा के सोच्छन् र उनीहरू आफैं रमाईलो गरिरहेका छन्।
जब तपाईले अरुसँग कुराकानी गर्नुपर्दछ, तपाईले पसिना पामहरू पाउनुहुन्छ, तपाईको मुटु अलि छिटो धड्किन्छ र तपाई तनाव महसुस गर्नुहुन्छ।
यी चिन्ताको सामान्य शारीरिक संकेतहरू हुन्।
यदि यो तपाइँले अनुभव गर्नु भएको चीज हो भने, यो संकेत हो कि त्यहाँ अन्तर्निहित मुद्दा छ जुन तपाइँलाई सम्बोधन गर्दा फाइदा हुन्छ।
१.. तपाई व्यक्तिसँग घनिष्ट हुन मन पराउनुहुन्न।
सामाजिक चिन्ताको अर्को पक्ष हो, भावनात्मक रूपमा अर्को व्यक्तिको नजिक जाने डर र सम्भावित जोखिम।
जे भए पनि, जब तपाई कसैको लागि धेरै महसुस गर्नुहुन्छ कि उनीहरूले तपाईको कार्यले तपाईलाई साच्चै चोट पुर्‍याउन सक्दछन्।
अघिल्लो बिन्दुको विपरित, यदि तपाईंसँग सामाजिक चिन्ता छ भने, तपाईं वास्तवमै सतही कुराकानीहरूलाई प्राथमिकता दिन सक्नुहुन्छ किनकि यसले तपाईंलाई आफ्नो गार्ड राख्न र वास्तविक भावनात्मक जडानलाई गठन हुनबाट रोक्न अनुमति दिन्छ।
यो दोहोर्‍याउन लायक छ कि यस प्रकारको भावना यस्तो चीज हो जुन तपाईले कार्य गर्न चाहानुहुन्छ, सम्भवतः सल्लाहकारको सहयोगबाट।
ब्रिटनी थेरियट को हुन्? रसेल क्रो को 30 वर्षीय प्रेमिका को बारे मा सबै
कसरी इम्पाथ्सले आफ्नो अनौंठो प्रतिभालाई उनीहरूको क्यारियरमा प्रगति गर्न प्रयोग गर्न सक्छ
WWE मा डीन एम्ब्रोस को5सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वंद्वी
कारण किन DDP WWE 'दफन' WCW ताराहरु को बारे मा गुनासो छैन
शेमसलाई लाग्छ कि उनी सम्भवतः रेसलमेनिया ३ 38 (एक्सक्लुसिव) मा एक पूर्व WWE च्याम्पियनको सामना गर्न सक्छिन्।
Life जीवन पाठ हामी विन्नी-द पूह र साथीहरूबाट सिक्न सक्छौं
तपाईंको भित्री बच्चासँग पुन: जडान गर्ने ays तरिकाहरू (र तपाईं किन चाहनुहुन्छ)
'म विगतमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दिन': जोश रिचर्ड्स जेडेन होस्लर र नेसा ब्यारेटको सम्बन्धमा खुल्छन्
5 WWE DVD को तपाइँ WWE नेटवर्क मा देख्नुहुन्न
Key कीस्टोन बानीहरू जसले तपाईंको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदछ
कसरी Cesaro आफ्नो दाँत हरायो?
WWE रोयल रम्बल 2017 अफवाहहरु, बिगार्ने र अधिक
कति चाँडै प्रेममा पर्न
कसरी एक सम्बन्ध मा ईर्ष्यालु छैन
रेन्डी ओर्टन र किम केसलर
तपाइँलाई नयाँ जीवन सुरु गर्न कति पैसा चाहिन्छ?